यो अन्त्य हैन! - Blogs of Sagar Prasai
यो अन्त्य हैन!
केहि दिन अगाडी मेरो मोबाईलमा नचिनेको नम्बरबाट एउटा फोन आयो। "हेल्लो, सागर जी बोल्नुभएको हो?"
मैले भने-"को बोल्नुभा' होला?"
उनले भने-"म यहाँ ट्राफिक प्रहरीबाट।हजुरले हाम्रो एप्सबाट कम्लेन गर्नुभएको रहेछ नि!"
उताबाट त्यसो भनेपछि पो मैले हप्तादिन जति अगाडीको त्यो घटना सम्झे।
एक बिहान म यसै गुगल स्टोरमा एप्सहरू हेरीरहेको थिएँ। ट्राफिक प्रहरीले पनि एउटा एप्स बनाएर राखेको रहेछ। कस्तो होला भन्ने सामान्य जिज्ञासाले डाउनलोड गरेर एकछिन चलाएँ। सामान्य खालको रहेछ- केहि सुचना, केही जानकारी र ट्राफिक कम्प्लेन गर्ने सुविधाहरू रहेछन्। मैले एकछिन चलाएर, त्यसलाई बन्द गरेँ।
त्यसको दुई दिन जति पछाडी म अफिस जाँदै गर्दा बानेश्वर चोकमा एकदमै जाम थियो। सबै गाडीहरू आफ्नो पालो कुरेर बसेका थिए। त्यतिकैमा पछाडीबाट सिनेमाको रेसिङ्ग सिनमा दौडाउने जस्तो बाईक आयो र जोड जोडले हर्न बजाउन थाले। हर्न पनि साधारण खाले हैन, प्रेसर हर्न- भन्नाले ठुला गाडीहरूमा हुने र एकदमै जोडले बज्ने हर्न। उसले यति हर्न बजायो कि वरीपरीका मान्छे दिक्क भएर गाली गर्न थाले। तर उसलाई के मतलब, जाम थोरै खुल्ना साथ बाईक घुईँ पार्दै स्वाट्टै अगाडी छिरायो। त्यहि बेला मैले उसको नम्बर याद गरेँ। स्कुटरको लाईसेन्स लिने बेला लिखित परिक्षाको तयारी गर्न पढेको पुस्तकबाट मलाई थाहा थियो- शहरी क्षेत्र भित्र प्रेसर हर्नको प्रयोग गर्न पाईदैन।
त्यो दिन अफिसमा पुगेर, मैले ट्राफिक प्रहरीको एप्समा सबै कुरा खुलाएर कम्प्लेन गरिदिए। साँच्चै भन्दा केहि होला भन्ने आश लागेर पनि हैन- यसै, त्यो बाईकवाला सँग सार्है रिस उठेर मात्रै।
यो घटना भएको तीन-चार दिन पछि त्यो पहिलो फोन आएको थियो।
"ए हजुर सर, मैले कम्प्लेन गरेको थिए। अब के गर्नुपर्छ होला"- मैले नम्र भएर सोधेँ।
उनले भने- "हैन केहि पर्दैन सागरजी। कार्वाही प्रक्रिया अगाडी बढाउनु भन्दा अगाडी तपाईँसँग कन्फर्म गरौँ भनेर।"
त्यसपछि ती प्रहरीले मसँग फेरी त्यो घटनाको बारेमा केहि कुराहरू सोधे। र फोन राखिदिए।
आज दिउँसो, फेरी मेरो मोबाईलमा नचिनेको नम्बरवाट फोन आयो। ट्राफिक प्रहरीकै रहेछ।
एकजना महिलाले नम्र भएर भनिन - "तपाईँको कम्प्लने अनुसार ती बाईकवालालाई कारबाही गरेका छौँ, ट्राफिक नियम पालना गराउन सहयोग गरेकोमा धन्यवाद।"
म त छक्क परेँ। मैले खासमा यो कुरा यस्तो मोडमा आएर टुङ्गिएला भन्ने एक मनले पनि सोचेको थिइन। हाम्रै देशमा मोबाईलको एप्सबाट प्रहरीलाई कुनै अपराधको बारेमा कम्प्लेन गर्दा प्रहरीले आफै फलो गरेर नियम तोड्नेलाई कारबाही गर्छन् भन्दा केहि दिन अगाडी सम्म म नै पत्याउँदिन थिए होला। तर भयो त्यसतै नै।
आज भोलि हाम्रो देशमा दिक्क हुने कारण धेरै छन्। तर त्यसता कारणहरू सोचेर दुखी हुनै लाग्दा- यस्ता खालका कुराहरूले मनमा फेरी आशा जउँगाँदो रहेछ। आज यो स्टाटस लेख्दै गर्दा मलाई कतै पढेको एउटा कुरा याद आयो- "अन्त्यमा सबै कुरा ठीक हुन्छ। यदि कुनै कुरा ठिक भएको छैन भने, याद राख, यो अन्त्य पनि त हैन।"
ट्राफिक प्रहरीको एप्स यहाँबाट डाउनलोड गर्न सकिन्छ।